အဆင်ပြေမလားလို့..ဂနန်းစားကြည့်မယ်.. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Different » အဆင်ပြေမလားလို့..ဂနန်းစားကြည့်မယ်..
Posted by garuda on Apr 14, 2013 in Think Different | 12 comments
အမှန်တော့ ဒီပိုစ့်ဟာဖြင့် Ko Fat Cat ရဲ့ ၉၆၉တဲ့လားမှာ ထပ်မန့်ခွင့် မပေးတော့တဲ့ အတွက်
ပိုစ့် တစ်ခုအဖြစ်တင်ထား ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာရေးခေါင်းစဉ်အောက်မှာ
တော့ မထည့်ချင်ပါ။ ၇၈၆ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၉၆၉ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာသာရေးအနေနဲ့ မြင်၍ မရလို့ပါ။
အဲ..အမျိုးသားရေး…ဘာရေး ညာရေးအဖြစ် ဆိုရင်တော့ လုပ်ကြပေါ့လေ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လို့
ခံယူသူများက သူတို့ခံယူချက်နဲ့ ပေးတဲ့နာမည်ဖြစ်လို့ မပြောလိုပေမဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုယ်စားပြု
မဟုတ်သလို..သိထားသလောက် ရဂ၆ ကိုလည်း တစ်ခြားဘာသာတစ်ခုရဲ့ကိုယ်စားပြု တစ်ခုလို့ မထင်မိပါ။
KFC ရေ..ခင်ဗျားပိုစ့်ကုို အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးတဲ့ သဘောနဲ့ ၀င်ရေးခဲ့ပါတယ်။ သံချပ်ကာအင်းကျီ ၀တ်တာ လက်ခံနိုင်ပေမဲ့။ ခင်ဗျားလက်ထဲကဓားကြီးကတော့ လပင်းတောင်ယားလာပြီ အခုဟာကတော့ သူ့ရဲ့ ပို့စ်မှာ
attach ment ဆိုသူမန့်ထားတာလေး ဖတ်ရလို့ သိထားတာလေးပြောရင်း မသိတဲ့ အဖြေလေးတွေများ
ရမလားလို့။ ပထမဆုံး ပြောချင်တာကတော့ ၇၈၆နဲ့ပတ်သက်လို့ ဖွဘုတ်ပေါ်မှ မွန်သူရဲကောင်း အမည်ဖြင့်
လူတစ်ယောက် က တခါရေးထားဘူးတာ ဖတ်လိုက်ရတယ် အဲဒီဂဏန်း or Bismallah or Basmala ဟာ
Queen ရဲ့ Bohemian Rhapsody ထဲမှာပါကြောင်း ဒါတောင်မသိကြဘူးလား ပညာမတတ်ကြဘူးဆိုလား ဘာလား
ပြောထားကြသေးတယ်။ (သူရေးထားတဲ့ အတိုင်းဖေါ်ပြချင်တာ သွားပြန်ရှာကြည့်သေးတယ်..မျက်စိပဲမွဲလို့လား..မတွေ့ခဲ့ပါ)။
သိသောသူများ ပညာတတ်သူများကို မေးချင်တာက
ဒီလို <b> “အကြင်နာတရား၊ မေတ္တာ ကရုဏာ ကျေးဇူးတော်ဂုဏ်နှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော ဘုရားသခင် ကို
ချီးမွမ်း ထောပဏာ ပြုပါသည်” </b> ဆိုသော လွန်စွာကြည်နူးဖွယ်ကောင်းသော အနက်အဓိပ္ပါယ် ရှိသော
ကိန်းဂဏန်း၏အကြောင်းကို ကျွန်တော်တို့ ပညာမတတ်သော မြန်မာနိုင်ငံသားများဟာ
နှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာ၊ ဘယ်ဘာသာခြားများ၏ လေးနက်စွာ ရှင်းပြခြင်းကို
မခံခဲ့ကြရတာလဲ။ “၂၁ရာစုနှစ်မှာ အုပ်စိုးရမည်တို့”..“မင်းတို့ဘုရားနဲ့ ၂၁ပေါက်ကစားရင်း
နိုင်လို့” တို့ (ကိုယ်တွေက မယုံပေမဲ့လည်း )စတဲ့..စိုးရိမ်စရာ/လှောင်ပြောင် ကောလဟာလ စကားများမှလွဲ၍ ဤကဲ့သို့သော ဂုဏ်တော်များဖြင့်
ပြည့်စုံခြင်းကို ဖော်ညွှန်းသည်ဆိုသည်ကို မည်သူမျှ မရှင်းပြခဲ့ပါ။ အများသုံးနေတဲ့စကား
နဲ့ပြောရရင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိခဲ့ဘူး လို့ထင်မိပါတယ်။ အဲ..အခု ပြဿနာတွေကြီးထွား လာတော့မှ ဟိုလိုပြောတာ ဒီလိုပြောတာတွေဖြစ်လာတယ်။
ကျေးဇူးပါ အာရဗီဗျည်းများ ကို ဂဏန်းများသုံးသော နည်းဟာ ၈ရာစုမတိုင်ခင်က စတင်အသုံး
ပြုကြောင်းသိလိုက်ရလို့။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီစကားစုကို ရ၈၆ အဖြစ်ပြောင်းပြီး စတင်ပြီး သုံးစွဲနေတာကရော ဘယ်နှစ်ခုနှစ်ကလဲ ခင်ဗျာ။
ကျမ်းစာထဲမှာရော ဘုရားအား ချီးမွမ်းခြင်းကို နံပါတ်များ အဖြစ်ပြောင်းလည်းသုံးခွင့်ရှိကြောင်း ဖော်ပြထားသလားခင်ဗျား။
အောက်ကလင့်လေးတွေ သွားကြည့်ပေးပါ ခင်ဗျာ။ ယုံကြည်စိတ်ချ ရသော လင့်များ မဟုတ်ပေမဲ့
ရ၈၆နဲ့ပတ်သက်လို့ ရေးထားတာ လေးတွေတွေ့ လို့ပါခင်ဗျာ။ ကိန်းဂဏန်းများကို သုံးခြင်း
ဗေဒင်ဟောခြင်း စသည်ဟာ အဲဒီဘာသာနဲ့ မကိုက်ညီကြောင်း သိထားပါတယ်။ ထိုသို့ ဂဏန်းများဖြင့် ဖော်ပြခြင်းဟာ guilty/against/evil ဖြစ်ကြောင်းကို အဲဒီလင့်တွေ
ထဲမှ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ အဲဒါကို ဘာအတွက်သုံးနေကြတာလဲ? တစ်ခြားနိုင်ငံတွေမှာ မသုံးကြပေမဲ့ သိသလောက်ကတော့ ပါကစ္စတန်/အိန္ဒိယ အချို့နေရာများနှင့် မြန်မာပြည်မှာပဲ သုံးနေတာတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသားများဟာဖြင့် ပညာမတတ်သူ များသဖြင့် တစ်ယောက်ယောက်က အထက်ပါမေးခွန်းများ အကြောင်းအရာ
နောက်တစ်ခုက အစားအသောက်အတွက်ဆိုရင် “ဟာလာ” or Halal လို့ သုံးခြင်းအားဖြင့်
စိတ်ဝင်စားရင် ၀င်ရောက်စားသောက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အချို့က ဟာလာလုပ်ထားခြင်းဖြင့်
ပိုမိုသန့်ရှင်းမှု ရှိတယ်/ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တယ်လို့လည်း ယူဆပြီး စားသုံးတာတွေ
ရှိတယ်လေ။ နောက်တစ်ခုက အဲဒီ mystery ကဲ့သို့ဖြစ်နေသော ဂဏန်းစုအစား အများနားလည်လွယ်သော…ကောင်းမြတ်သောစာစု ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းထားသော စာစုအား ရေးသားထားခြင်းဖြင့် ဖတ်ရသူအပေါင်းတို့ ပိုမိုစိတ်ချမ်းသာမှု မရရှိနိုင်ပေဘူးလား?
အဆင်ပြေမှု တစ်ခုဖြစ်မလား လို့ ရေးကြည့်တာပါ။ အပိတ်အနေနဲ့ ပြောချင်တာကတော့ ဘာသာများမှာ တရားဝင် ရှင်းလင်းမဆိုထားတဲ့ နံပါတ် အစုတစ်ခုဟာ… လူအုပ် ကြီးကြီးမားမား တစ်စုက ၂၁ရာစုမှာ ငါတို့အုပ်စိုးရမည် ဟုလျို့ဝှက်စွာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားနိုင်သလို၊ ၂၄ ရာစုမှ ငါတို့ အုပ်စိုးရမည်ဟု လည်း အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆို ထားတာ ဖြစ်သွားနိုင်တယ် ထင်ပါတယ်။ အားလုံးက ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မဟုတ်တဲ့ အဓိပ္ပါယ် မဟုတ်ကြောင်း
အတိအလင်း ကြေငြာရှင်းလင်းချက်လေးတွေ ထုတ်နိုင်ရင်တော့ tension လေးတွေတော့ နဲနဲလျော့ကျမှုလေးတွေ ရှိလာမယ်ထင်ပါတယ်။ ၉၆၉နဲ့ ပတ်သက်လို့ အမြင်လေးတွေလည်း ထပ်ရေးချင်ပါသေးတယ်။
လူသားအားလုံးကို လေးစားပါတယ် (credit to မင်းသား ကျော်ဟိန်း)
ဂနန်း ဆိုလို့ အနော် က စားတဲ့ အကောင်လားလို့။
ကြံဒါ ပြောဂျင်ရင် ပြောဘာနဲ့…တစ်ခုပဲ..အဲဒီ ဂနန်းဟင်းဒွေက ရန်ကုန်မှာရဒါလား ဟင်..ဖစ်နိုင်ရင် ဆိုင်လိပ်စာလေး
ရှေးတချိန်က. အရှေ့တောင်အာရှကို တကယ်လွှမ်းမိုးထားနိုင်တဲ့.. ဘာသာတရားက.. ဟိန္ဒူဘာသာပါ..
အသောကမင်းနောက်.. မြေးမြစ်တွေက..နှစ်ရာချီပြီး.. ဟိန္ဒူအင်ပါယာချဲ့ထားနိုင်ခဲ့တယ်..
သမိုင်းအထောက်အထားတွေအရ.. မြန်မာပြည်အပါအ၀င်.. လာအို.. မလေး..အင်ဒိုနီးရှားတွေဖက်အကုန်ရောက်ပါတယ်..။
အိန္ဒိယသားတွေကို.. မြန်မာတွေက.. ကုလားတွေလို့.. ခေါ်တယ်..
ကုလားဆိုတာ.. ကောင်းတဲ့အဓိပ္ပါယ်လို့.. ပြောကြတာလို့.. မှတ်တမ်းတွေရှိတယ်..
အိန္ဒိယပြည်သား.. ဘီလီယန်(သန်းထောင်)ချီတဲ့လူတွေကိုးကွယ်တာ.. ဟိန္ဒူဘာသာဖြစ်ပါတယ်..
အဲဒါကြောင့်.. ကုလားဆိုတာ.. အိန္ဒိယနွယ်သား.. ဟိန္ဒူဘာသာကိုးကွယ်သူတွေကိုခေါ်တာလို့.. မှတ်ယူသင့်ပါတယ်..။
တလောကတင်.. အော်စကာရတဲ့.. Life of Pi ရုပ်ရှင်မှာ.. မင်းသားက သူ့ကိုယ်သူ..ကက်တလစ်-ဟိန္ဒူလို့သုံးသွားတာလေး.. သတိရမိတယ်..
လေ့လာမိသလောက်.. ဟိန္ဒူတွေက.. ဇတ်ခွဲတယ်..။
အဲဒါကိုတန်ပြန်တဲ့အနေနဲ့.. ဟိန္ဒူအင်ပါယာထဲမှာ.. ဂျိန်းဘာသာ….ဗုဒ္ဓဘာသာအပါအ၀င်.. အစ္စလမ်ဘာသာဟာ.. ဟိန္ဒူနဲ့အတိုက်အခံ..အကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ယူဆမိပါတယ်..
အဲဒီတွန်းတိုက်လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်ပဲ.. အိန္ဒိယနဲ့..အရှေ့တောင်အာရှဖက်က(အရင် ဟိန္ဒူအင်ပါယာ)ထဲပါတဲ့ဒေသသားတွေဟာ.. စိတ်ဓါတ်ရေးရာအရ.. နည်းနည်းပြင်ထန်ပါတယ်..
အဲဒီတွန်းတိုက်လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်ပဲ..အိန္ဒိယပြည်ဟာ.. လွတ်လပ်ရေးရပြီးမှာ.. ပါကစ္စတန်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဆိုပြီး.. ၃ပိုင်းကွဲတယ်..။
အစ္စလမ်ဘာသာထဲမှာကို.. မိန်းမကိုဗလီထဲပေးမ၀င်တာမျိုးတွေလုပ်တာ.. .. မြန်မာ-အိန္ဒိယတို့လောက်မှာပဲရှိတယ်..
ကန့်သတ်မှုတွေက.. အစ္စလမ်ဘာသာရဲ့မူလ အရှေ့အလယ်ပိုင်း(ဆော်ဒီ၊အီရန်၊)ဒေသတွေထက် ပိုတယ်လို့.. မွတ်ဆလင်တယောက်ကပြောဖူးပါတယ်..
၇၈၆ ဂဏန်းကလည်း.. သာမန်အားဖြင့်.. အစ္စလမ်နိုင်ငံတွေမှာ ထုံးစံနဲ့သုံးကြပုံမရှိပါဘူး..
ဗလီတွေကို.. တတ်နိုင်တဲ့ငွေကြေးထက်ပိုမွန်းမံချဲပြင်တာမျိုးတွေလည်း.. အစ္စလမ်မစ်နိုင်ငံတွေမှာမရှိပါဘူး..
အဲဒီဒေသထဲက.. ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေလည်း.. ဒီအတိုင်းပဲသွားဖြစ်တယ်..
မြန်မာပြည်ကဗုဒ္ဓဘာသာဟာ.. ကမ္ဘာတန်းနဲ့ကြည့်ရင်.. လူအများစုကိုးကွယ်တဲ့.. ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်..သန်း၅၀၀ကျော် ထက်စာရင်.. ပိုပြင်းထန်နေပါတယ်..။
ဘုရားတွေပိုဆောက်တယ်..။ အစွန်းရောက်ကျင့်တာမျိုးတွေရှိတယ်..။ ဂျိန်း.. ဟိန္ဒူ… နတ်တွေနဲ့ရှုပ်ထွေးရောကုန်တယ်..။
အခုကျင်းပနေကြတဲ့.. နှစ်ကူးသင်္ကြန်ပွဲဆိုတာက.. ဟိန္ဒုအယူအဆကလာတာပါ..
ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့..ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး..။ လုပ်ရင်းနဲ့.. ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့.. ရိုးရာဖြစ်သွားတယ်လို့မှတ်ကြပေါ့..။
ကျုပ်ရေးတာမှာ.. မှားတာရှိ.. သိတတ်သူများ.. ထောက်ပြဆွေးနွေးပေးစေလိုကြောင်း..
အမြည်းကောင်းကောင်း လုပ်ပေးရဲ့လား :harr:
ဟုတ်ကဲ့ သူဂျီးမင်းခင်ညား…ရှေးတချိန်က ကပါခင်ညား…
ဒါပေမဲ့ အချိန်မှာတော့ အိန္ဒိယမှာ ဟိန္ဒူဘာသာလျော့နည်းလာပြီး..မူဆလင်ဘာသာဝင်များ
လူသားများ ရဲ့ ယုံကြည်ချင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှု ပေါ့ဗျာ :hee:
နောက်ပိုင်းမှာ အသောက မင်းကြီးက ဗုဒ္ဓဘာသာကို ယုံကြည်သက်ဝင်
လာပြီး ပြန့်ပွားအောင်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ လည်းကြားဖူးတယ်နော်…အဲဒီ တစ်ချက်ပါတာကြောင့်လည်း
ရှိချင်ရှိမှာပေါ့လေ။ ဥပမာ…သူ့ရဲ့ ဘုန်းကံက ကျချိန်ရောက်လာ သောကြောင့်။
ရှေ့က..မအေ xxxx ကုလား/တရုတ်/ဗမာ လို့ခေါ်ရင်တော့ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်
နာမှာပဲလေ။ အဲဒီမှာမှ…သီးခြားနေထိုင်သူအဖြစ်နဲ့ အခေါ်ခံရတယ် ထင်ရင်တော့
(inferiority complex-စီဒီတူဘဖော) ဖြစ်မိမှာကတော့ ဓမဒါ ပါပဲလေ။ ဒါကတော့ ရိုင်းသူရှိသလို
ယဉ်သူလည်းရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် တစ်ခြားမှာတော့မသိ ရန်ကုန်မှာ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားဘ၀
ကိုဖြတ်သန်း ခဲ့ဘူးတဲ့ သူတွေဆိုရင် သိပါတယ်..ရင်းနှီး ခင်မင်မှုနဲ့ ခေါ်ကြတာပဲရှိတယ်။ ဘာလူမျိုး
ဘာသာခွဲခြားမှုမှမရှိဘူး။အရမ်းကိုရှားတယ် ကျွန်တော့် ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ လေးနှစ်(၃နှစ်လားမသိ..မေ့သွားပြီဗျ)
ကာလမှာတော့ မတွေ့မိဘူး။ မူဆလင်ဖြစ်လည်း စားသောက်ဆိုင်တွေလိုက်ထိုင်တယ်..လဖက်ရည်..ကိတ်မုန့်
မှာစားတယ်။ အကြော်အလှော်တွေတော့ မစားဘူးပေါ့ဗျာ။ သတ်သတ်လွတ်ထမင်းသုတ်/လဖက်ထမင်းသုတ်တို့
မှာစားတာတောင် တွေ့ဘူးတယ်။သဂျီးရဲ့ ကျွန်တော်တို့ ပညာမဲ့တဲ့ ဗမာများက ကုလားဆိုတာ အင်္ဂလိပ်လက်ထက်
ကမှ ကုလားပြည်က ၀င်လာတာပဲမြင်ဘူးတာလေ။ တိုင်းပြည်ထဲကိုလည်း တစ်ခြားလူမျိုးတွေ-ဥပမာ..အရှေ့အလယ်
ပိုင်းကတို့..ဂရိတို့ ဆားဘီးယမ်းတို့ တစ်ချို့ တောင်အမေရိကတိုက်ကတို့ စပိန်တို့ စသည်တို့ လာလေ့မရှိတဲ့ အတွက်
မသိတဲ့လူ အတွက် က ကုလားပဲလေ။ အဲဒီတော့ သေသေချာချာ မခွဲတတ်ကြဘူး။ မျက်ခုံးကောင်းကောင်း
အမွေးထူထူ နှာခေါင်းချွန်ချွန်/ကြီးကြီး မြင်ရင် ကုလားပဲထင်ကြတယ်။ ကျွန်တော်တောင် နိုင်ငံခြားရောက်စက သိပ်မခွဲတတ်ဘူး။
Multiculture ကျင့်သုံးနေတဲ့ သြစတြေးလျမှာတောင်..သူတို့ ကိုရီးယား..တရုတ်နဲ့ ဂျပန်..ကိုမခွဲတတ်ကြသလိုပေါ့။
တစ်ခြား asian တွေကိုလည်းသူတို့ မခွဲတတ်ကြဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ယိုးဒယားလို ဖိလစ်ပင်းလို ဆိုရင်
တော်တော်များများက ကိုယ်တွေနဲ့တူနေလို့ မခွဲတတ်ပေမဲ့။ လာအိုရှန်၊ဗီယက်နမ်ဆိုရင်တော့ နဲနဲပိုကွဲတော့ ခွဲတတ်တယ်။
ကျွန်တော်ဆိုရင် ဖိလစ်ပီနိုတွေ ယိုးဒယားတွေက သူတို့လူမျိုးနဲ့ခဏခဏမှားပြီး စကားလာပြောတတ်ကြတယ်။
အဲဒီထက်ပိုမှားတာကရှိသေးတယ် စစ်ဌာနီလေဆိပ်မှာ ဆမိုဝါကျွန်းသူမကြီးက ကျုပ်ကို သူတို့လူမျိုးအောက်မေ့လို့
သူ့နားလာထိုင်ခိုင်ပြီး စကားတွေပြောနေလို့….ကျုပ်ကိုယ်တိုင်လည်း မြန်မာပြည်က အမကြီးတစ်ယောက် ရင်းရင်းနှီးနှီး
စကားလာပြောနေသလိုခံစားရလိုက်ပါတယ်။ကုလားဆိုတဲ့ဝေါဟာရ ကဘယ်လိုပြောမလဲဗျာ..ငယ်ငယ်ထဲက ကုလားကားသွားကြည့်ကြမယ်ဟေ့တို့။ ဒီဗမာကားက ဟိုကုလားကားကိုပြန်ရိုက်ထားတာကွ တို့ဆိုတော့… စဉ်းစားကြည့်လေဗျာ..မုန်းတီးတဲ့ဟာ
ဆိုရင်..အဖက်လုပ်ပြီးကြည့်နေ အတုခိုးနေတော့မလား။ ငယ်ငယ်တုန်းက အဒေါ်တွေ အမတွေ ဆိုပြောနေသံကြားနေရတယ် “ဟယ်..ဟိုကောင်လေးဟာဖြစ်..ချောချက်ကတော့ ဘယ်ကုလားမင်းသားလေးနဲ့တူကြောင်း မျက်တောင်လေးဟာဖြင့်ကော့
နေထှာ ဘယ် ကုလားမင်းသား/မင်းသမီး ဖြင့်တူကြောင်း…
သောက်ငြင်ကတ်လောက် အောင်ကြားနေရတာ..ကျုပ်သာ ကုလား
မုန်းတီးသူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့..ဒီ ဆွေမျိုး အမျိုးသမီးများကြောင့်ပဲဖြစ်မယ်။ :harr: (ရီစရာပြောတာပါ) ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဗမာပြည်မှာတော့ ဟိန္ဒူရယ်မဟုတ်ပါဘူး အိန္ဒိယကလာရင်(သို့) အိန္ဒိယက လာသူအသွင်အပြင်ရှိရင်(ပါကစ္စတန်၊သီရိလင်္ကာ၊နီပေါ)စသည်ကို ကုလားပဲခေါ်ကြတာပါပဲ။
သမိုင်းကြောင်းအားဖြင့် ဘယ်သူတွေကိုခေါ်တာလည်းတော့မသိပါ။ အဲ..အမေဂျစ်
ကားမှာတောင် ဟိုတလောက..ဆစ်(ခ) ဘုရားရှိခိုးကြောင်းကို သေနတ်နဲ့ ၀င်ဆွဲသွားသေးတယ်လေ။ ဆစ်(ခ)တွေက ဗုဒ္ဓဘာသာ
နဲ့လည်းဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ခေါင်းပေါင်း ပေါင်းထားတော့ တာလီဘန်နဲ့မှားပြီး ဆွဲသွားတာလားတော့မသိ။ တကယ်တော့ သိတဲ့လူဆိုရင် ခေါင်းပေါင်း ပေါင်းပုံချင်းကွာ
မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ တစ်ချို့ကလည်း အဲဒီလူက နီယို နာဇီဆိုလား မသိပြောကြတယ်။
အဲ..သူကြီးပြောတဲ့ ဟိန္ဒူတွေက ဇာတ်ခွဲတာတော့ လက်ခံတယ်ဗျာ..သူတို့ ဇာတ်ခွဲခဲ့သမျှ..အင်္ဂလိပ်တွေ လူမျိုးကြီးဝါဒရှိခဲ့တဲ့ ဟာတွေကြောင့် ကျုပ်တို့နိုင်ငံမှာလာထိခိုက်တာပဲ..အဲဒါကတော့နောက်မှ ပဲရေးတော့မယ်။
ဘယ်သူတွေ တစ်ချိန်တုံးက ဘယ်လိုပဲ ဇာတ်ခွဲခဲ့ခွဲခဲ့…အခုခေတ်ကတော့…အကောင်ကြီးတဲ့ကောင်က သေးတဲ့ကောင်ကိုအုပ်တဲ့ခေတ်ပဲ..
အဲ.. အုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ အရင်ခေတ်ကလိုဘလိုင်းကြီး မ၀င်ဘူးနော်..အရင်..သွေးဆူအောင်ဆွပေးတယ်..
နောက်ကျရင်…အဘား အဘား ခံနေရပါပြီလို့အော်မယ်..ပြီးရင်တော့..အပျော့နည်းနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အကြမ်းနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ၀င်လာလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ ဘယ်နေရာကိုဖြစ်ဖြစ်
အုပ်စုကြီးတဲ့ လူကအုပ်စုသေးတဲ့သူတွေကို အကြောင်းပြ အနိုင်ကျင့်တဲ့နည်းပဲ။
ပါ့ပေါ့တွေးရင်..ခံရတဲ့ အခါ လေးလေးကြီး ကိုခံရတတ်ပါတယ်။ သတိဆိုသာ ပိုသည်မရှိဆိုလား
အိန္ဒိယမှာ.. ဟိန္ဒူဘာသာကိုးကွယ်သူ.. ၈၀ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်….လို့..။
According to the 2001 census, 80.5% of the population of India practice Hinduism. Islam (13.4%), Christianity (2.3%), Sikhism (1.9%), Buddhism (0.8%) and Jainism (0.4%)
သာမန်အားဖြင့်.. ဂေါတမဗုဒ္ဓနဲ့.. ဂျီဇက်ခရိုက်စ် နှစ် ၆၀၀.. ဂျီးဇက်နဲ့မိုဟာမက် နှစ်၆၀၀ လောက်စီကွာတယ်မှတ်ပါ..
အသောကမင်းက.. ဗုဒ္ဓနောက်.. နှစ်၃၀၀လောက်မှတ်ပါ..။
ဘာသာတရားတို့ရဲ့.. အချိန်ဇယားလေး..အကြမ်း ပြောတာပါ..။
ကျုပ်ကတော့..ကိုးကွယ်ရာ.. ဘာသာတရားဆိုတာကြီးတွေ.. ဒီရာစုနှစ်မကုန်ခင်တင်အကုန်ကြွမယ်မှတ်တာပဲ..။ တခြားစင်္ကြာဝဌာကို ကြွချီတော်မူမယ်ပြောတာပါ..
ဟိုလိုဝင်..ဒီလိုအုပ်..ဘာလုပ်လုပ်… ဒါတွေက.. နိုင်ငံရေးပဲ.. လို့..။ :harr:
အိန္ဒိယ ဟိန္ဒူတော့မပြောတော့ဘူး ပါကစ္စတန်မူဆလင် နိုင်ငံမှာတောင် လူမျိုးခွဲခြားမှုတွေရှိတယ်။
Half the sky စာအုပ်ထဲမှာဖတ်ဘူးတာတော့ မူဆလင်အချင်းချင်းတောင် ဇာတ်မြင့်တွေက
သူတို့ လူမျိုးစုထဲက ကောင်မလေးနဲ့ ရီးစားဖြစ်လို့ဆိုပြီး ဇာတ်နိမ့်တဲ့ အုပ်စုထဲက
ကောင်လေးကို ၄ယောက်က၀ိုင်းပြီးမုဒိမ်းကျင့်..တစ်ခါ အကျင့်ခံရတဲ့ ကောင်လေး
ရဲ့အိမ်သားတွေကို သူတို့ ကိုလာတောင်းပန်ခိုင်းတယ်။ ကောင်လေးအမက တောင်းပန်ဖို့
လိုက်သွားတော့ အမကိုပါ သူ့မောင်အပြစ်ဒဏ်အတွက် ပေးဆပ်ခိုင်းတယ်ဆိုပြီး
တစ်ခါ လူအများကြီးရှေ့မှာပဲ ဆွဲခေါ်သွားပြီး မုဒိမ်းကျင့်ကြ..
သဂျီး ပြောတဲ့ နွားအသိဥာဏ်နဲ့..လူအသိဥာဏ်ဆိုတာ အဲသလိုကွာတာလား..သဂျီးရဲ့။
လူတွေးတွေး တာထင်ပါရဲ့ အဲဒီအမှုဟာ ကမ္ဘာမှာ ဟိုးလေးတကျော် ဖြစ်သွားတာ
အဲဒီမိန်းကလေးတောင် အမေဂျစ်ကားရောက်သွားပြီး ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခံရတဲ့အထိ။
ဗလီကတော့ မချဲ့ဘူးလေ စဆောက်ကတဲ့က ဖြစ်နိုင်ရင် အကြီးကြီးဆောက်ပလိုက်တာ
မဟုတ်ဘူးလား။ ပြီးတော့ သူတို့ကတစ်နေရာထဲချဲ့တာ မဟုတ်ဘူးလေ..ဆင့်ကဲဆင့်ကဲ နေရာဖြန့်
ညနေဆိုရင် ထင်ပါတယ်။ သူတို့ လော်စပီကာကနေ အော်တာ တစ်နေရာပြီးရင် နောက်တစ်နေရာ
မြန်မာပြည်က ဗုဒ္ဓဘာသာက ဘယ်လိုများပြင်းထန်ပါလဲ။ ဗမာပြည်က ဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးတော့
သဂျီးဘယ်မှာမှ ရှာတွေ့မှာ မဟုတ်ဘူး။ ကောင်းလွန်းလို့။ ပြင်းထန်တယ်ထင်ရင် တိတိကျကျ
ပြောလေ..ဘယ်အပိုင်းမှာလည်း။ဘာနဲ့ပတ်သက်လို့လဲ? အစွန်းရောက်အကျင့်ဆိုတာ ဘယ်
လိုများလဲ? ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ပြောလိုက်ပါ။ ကျုပ်ကလည်း ဟုတ်တယ်ဆိုရင် မဆိုင်းမတွ လက်ခံလိုက်
မယ်။အဲတစ်ခုတော့ ပြောလိုက်မယ်..ကျုပ်က ဗုဒ္ဓဘာသာကို ယုံကြည်တယ်ဆိုတာ
သူများပြောလို့ သူများကတော့လို့ လိုက်ယုံ/ကန်တော့နေတာ မဟုတ်ဘူး။
တန်ခိုးရှိလို့..ကျုပ် အားကိုးနိုင်တဲ့ တန်ခိုးစွမ်းအားတွေရှိလို့ ကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူး။
ကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာထက် ယုံကြည်တယ် လို့ပဲပြောခြင်တယ်။ ငါးပါးသီလမှာ တစ်ပါးပဲ
လုံတယ်လို့ပဲ ပြောရမယ်။ “သူတစ်ပါးပစ္စည်းခိုးယူခြင်း” ။တကယ်တော့ အဲဒါကလည်း
ခိုးစရာမလိုသေးတဲ့ အခြေနေမို့ လို့ပါ။ :harr: အဲဒီတော့ သဂျီးက ပေါ့ပေါ့တော့
ရှင်းရင်ဖြင့် ကျုပ်ကလက်ခံမှာ မဟုတ်ဘူး။ သေသေချာချာ အထောက်အထားဖြင့်
နားလည်အောင် ရှင်းလင်းပေးပါလို့ တောင်းဆိုပါရစေ။ ဟဲဟဲ..ငြင်းခုန်ခြင်းအနုပညာ
ဘုရားဆောက်တဲ့ ကိစ္စပြောချင်တယ်…ဗမာပြည်မှာ ဘုရားတည်တယ်ဆိုတာ…အစိုးရက
ပြည်သူကိုဆွယ်နည်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်မယ်…အမှန်တော့ ဘယ်သူမှ ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ ထောက်ခံလို့
တည်နေတာ မဟုတ်ဘူး။။အဲဒီကိစ္စကို..တစ်ခြားတော့ မသိဘူးကျုပ်ဝန်းကျင်မှာ ကြားနေရတာကတော့
သူတို့ပြုတ်မှာ ကြောက်လို့ ဘုရားတည် ရတယြာခြေတယ်လို့ ပဲပြောသံကြားဖူးတယ်။
တောနယ်တွေမှာတော့ တောသူတောင်သားတွေဟာ ထုံးစေတီလေးတွေကို သူတို့မှာ ရှိစုမဲ့စုပိုက်ဆံ
လေးတွေနဲ့ တည်ထားကိုးကွယ်ကြတယ်။ ပြည်သူတည်သော စေတီတွေဟာ အဲဒါပဲရှိတယ်သူကြီး။
ကြိုက်တဲ့သူ (ဘာသာခြား/ဘာသာတူ) တခါးမရှိ ဓားမရှိ ၀င်ထွက်သွားလာခွင့်ရှိတယ်။ ငါတို့ပိုင်တဲ့နေရာကြီး
ုဆိုပြီး ဘယ်သူမှ သိမ်းပိုက်မထားဘူး။ သဂျီးပျင်းတဲ့နေ့ ရွှေတိဂုံပေါ်တက်…အရိပ်တစ်ခုခုအောက်မှာ ထိုင်ပြီး
ငိုက်နေရင်တောင် ဘယ်သူမှ တိထ္ထိကြီး အိပ်နေတယ်ဆိုပြီး လာနှောက်ယှက်မှာ မဟုတ်ဘူး။ အဲ..ဆင်းတုတော်တွေ
ခိုးဖို့..ဖျက်ဆီးဖို့တော့ မကြံနဲ့နော်…အခန့်မသင့်ရင် တစ်ခါထဲနော် အဲဒီနေရာမှာတင် အမှုန့်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။
အရင်ကတည်းက ကျွန်တော်ပြောဖူးတယ်…ဗမာဟာ..တရုတ်နဲ့ ကုလားဆီက အတုယူရတာပါဆိုတာကို။
တရုတ်ကြီးကလည်း ကုလားနဲ့ သာ မတည့်တာ။ ကုလားဆီက အကုန်ပုံတူရိုက်တာပဲ မဟုတ်လား?
၀ူခုန်းက အစ ကုလား ဇာတ်ထုတ်တွေပဲမှုတ်လား။မိုးမြေကန်တော့တာ။ ကွမ်ရင်မယ်တော်..စသည်ဖြင့်။
ရှောင်လင်ကျောင်းတောင်..အိန္ဒိယဖုန်းကြီး က စထောင်ပေးထားတာလို့ ကြားတယ်။ ၀က်သားစားတာ
ကလွဲလို့ တရုတ်အယူအဆများက ကုလားဆီကလာတာ ယူတာပဲ မဟုတ်လား။ ရာမာယနဇာတ် မြန်မာ..
လာအို..ယိုးဒယား..အကုန်လုံး သူ့ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့သူ ကကြပေမယ့် အဲသဟာလည်း ကုလား ဇာတ်ထုတ်
( တစ်ခုတော့ ပြောလိုက်မယ်..ကျုပ်က ဗုဒ္ဓဘာသာကို ယုံကြည်တယ်ဆိုတာ
သူများပြောလို့ သူများကတော့လို့ လိုက်ယုံ/ကန်တော့နေတာ မဟုတ်ဘူး။)
ကျုပ်က ခင်ဗျားတို့ထက် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့ တရားတော်တွေကို ပိုယုံတယ်
ဒါ့ကြောင့် ကျုပ်က အခြားပြောသံကြားတရားနာ
သယ်ရင်း “မာဝီကြီး” ဗရာကြော်ပါ…
ဆက်ဆွဲရမယ်ဆိုရင် ကျုပ်တို့အမျိုးသားဝတ်စုံဘက်ကို လှည့်ပါဦး…
“ခေါင်းပေါင်း ပုဆိုး… အိန္ဒိယက ယူတာ” “တိုက်ပုံ လည်ကတုံး… တရုတ်က” ဆိုရင်…
ဟီ ဟိ… ဂဏန်းသွား သွားတယ်မထင်မိဘူး၊ ဆက်ရေးပါ သယ်ရင်း… အဆဲခံကြတာပေါ့…
တစ်ခါတလေ ကျ သူကြီးက မြန်မာပြည်ကလူတွေ တွေးတတ်ခေါ်တတ် တွေးရဲ ခေါ်ရဲ အောင် လုပ်ပေးနေတယ်လို ထင်ရပေမဲ့
တစ်ခါတလေ ကျ တချို့လူတွေ စွတ်စွဲသလို အဖွဲ့အစည်း တစ်ခု အတွက် အလုပ်လုပ်ပေးနေတယ်လို့ ခံစားရတယ်
ဒီပို့ စ်ထဲ ဝင်ဖတ်ပြီး ဘာမန့် လို့ မန့် ရမှန်းမသိဖြစ်နေချိန်
ဘိုနို့ ကွန်မင့် မြင်မှပဲ ဝမ်းသာအားရဖြစ်မိတော့တယ်ဗျား
သဂျီး ရဲ့ စည်းကမ်းကို ခပ်တည်တည်နဲ့ ချိုးဖောက်လိုက်ကြပါစို့ 
“တစ်ခါတလေ ကျ တချို့လူတွေ စွတ်စွဲသလို အဖွဲ့အစည်း တစ်ခု အတွက် အလုပ်လုပ်ပေးနေတယ်လို့ ခံစားရတယ်”
ပြောဆိုနည်း Presentation နဲ့ စိတ်ထဲရှိတာနဲ့ လွဲတတ်ပါတယ်။
ပြောဆိုနည်း Presentation က စိတ်ထဲရှိတဲ့ အတိုင်း ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
ဒီအတိုင်း ယုံကြည်ရာ ဆက်သွားပေါ့။
နံပါတ်သုံးတာနဲ့ ဘာသာရေးနဲ့တော့ ဘာမှမဆိုင်ဘူး လို့ ခံစားရပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့ တရားဟာ ကိုးကွယ်ရာဘာသာရေးတရား လို့ ပြောမရပါ။
သံသရာကနေလွတ်မြောက်အောင် ကျင့်ကြံရတဲ့ အကျင့်အကြံ အားထုတ်မှုပါ။
အဲဒီလို အကျင့်အကြံမှာ ဟိုအစွဲ ဒီအစွဲ နဲ့ ငါ ဆိုတဲ့ အတ္တ တွေ က အနှောက်အယှက်ပေးပြီး တရားလမ်းမှန်ကနေ ဆွဲချနေတာ လို့ ထင်တာလေး ပြောပါတယ်။